O J Simpson oo xabsiga laga sii deynayo - BBC News Somali
O J Simpson oo xabsiga laga sii deynayo
O J Simpson in kastoo ay da' ka daba timid, haddana weli waa nin si sahlan loo aqoonsan karo
Laacibkii hore ee Kubadda cagta Maraykanka, marna jilaa ahaa, Orenthal James Simpson oo loo yaqaanno O J Simpson ayaa loo ballan qaaday in xabsiga laga sii deynayo, ka dib 9 sano oo uu ku xirnaa jeel ku yaalla Nevada.
"Mahadsnidiin" ayuu yiri 70 jirkaas oo gorodda laad-laadiyey, ayadoo guddigii xaakimiinta ahaa ay ansixiyeen in la sii dayo bisha Oktoobar.
Simpson ayaa u xirnaa burcadnimo hubaysan, weerar uu ku gaystay hub wax dila, iyo 10 eedeymood oo kale oo uu ku jiro iska hor imaad ka dhacay hotel ku yaalla Las Vegas 2007.
Waxaa lagu waayay 1995 eedeynta ah inuu dilay xaaskiisi hore, Nicole Brown Simpson iyo saaxibkeed Ron Goldman.
2008 ayaa lagu helay kiis ku saabsan dhac hubaysan, waana isla sannadkii lagu waayey dacwad loogu yeero Dacwaddii qarniga.
Isaga iyo koox 5 qof ka koobnaa ayaa xoog ku galay qol hotel ku yaalla Las Vegas, waxayna is qabsadeen laba qof oo ah dadka uruuriya waxyaabaha xusuusta u leh cayaaraha. Waxay halkaa ku qaateen alaab uu sheegay inuu lahaa.
Mid ka mid ah raggii uu wakhtigaas u xoog sheegtay, Bruce Fromong, ayaa yiri "ma dareensani inuu iminka cidna khatar ku yahay. Waa nin wanaagsan, waana wakhtigii fursad labaad la siin lahaa". O J Simpson iminka waa 70 jir.